NGU-ANASTASIA STEFANUK JUNE 3, 2019 AULMENTED REALITY, GUEST POSTS
Amabhizinisi emhlabeni wonke manje ahlanganisa ubuchwepheshe ukukhulisa imikhiqizo nezinsizakalo futhi ahambisane nezikhathi. Izindlela ezintsha ezilindelwe zobuchwepheshe zango-2020 zencike ekufakweni kwezinketho zangempela ezikhulisiwe ezifana ne-Augmented Reality (AR) ne-Virtual Reality (VR) ezimbonini eziningi, ikakhulukazi kuRetail. Ukuba nolwazi oluthe xaxa ngokufunda isicelo sebhizinisi elinjalo nezinkampani ezingokoqobo ezisebenzayo nakanjani zilusizo.
Kungani Sebenzisa i-VR Kwebhizinisi?
Kunezinzuzo eziningi zebhizinisi uma usebenzisa i-VR tech. Ngo-2018, imakethi ye-AR / VR yathengiswa cishe ngamadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyishumi nambili, kanti kubikwa ukuthi izonyuka ibe ngaphezulu kwama- $ 192 billion ngo-2022.
1. Okuthuthukile Kwekhasimende
I-VR ne-AR ivumela ukuthenga okungaphakathi kakhulu futhi okugxile kokuthenga. Izinzwa zabathengi ziyabandakanyeka futhi ziyakwazi ukuzicwilisa futhi zigxile kokuhlangenwe nakho okungaphandle kweziphazamiso zangaphandle. Lokhu kuvumela abathengi ukuthi babone umkhiqizo endaweni ebonakalayo.
2. Amasu Okumaketha Aphakathi Naphakathi kanye Nokubambisana
Ubuchwepheshe be-VR buvumela amabhizinisi ukuthi abe nezinguquko ezinhle kakhulu ekusebenziseni umqondo wokuthi 'zama ngaphambi kokuthenga'. Nge-VR, ukumaketha komkhiqizo kugxile ekwakheni umuzwa wokubamba iqhaza wokuqala womkhiqizo. I-VR iyakwazi ukuthutha abantu iye nayo noma kuphi, yangempela noma ecatshangelwe. Lobu buchwepheshe bususa ukumaketha kusuka ekutsheleni izindaba zomkhiqizo kukhombisa futhi kuvumela abathengi nabatshalizimali ukuthi babone umkhiqizo uqobo.
3. I-Advanced Business Business and Consumer Analytics
I-VR ivumela abathengi ukuthi bahlole ukuthengiswa kwemakethe, ukusebenza, kanye nekhwalithi yomkhiqizo. Amabhizinisi ayakwazi ukuqoqa imininingwane ethe xaxa yokuthi imikhiqizo itholwa kanjani ngabathengi. Abakhangisi bahlaziya idatha eqinile engasetshenziswa ukuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo nokwandisa ukuthembeka kwamakhasimende.
Iqiniso elingokoqobo linikeza amathuba amaningi wohlelo lokusebenza kwizimboni ezahlukahlukene. Abakhangisi bayakwazi ukwakha ukulindela kanye nentshisekelo ngokunikeza abangahle babe ngabathengi kanye nabatshalizimali ithuba lokuzwa imikhiqizo noma izinsizakalo ezinikeziwe, njengokuhamba nokuvuselela isikhala. Ukusetshenziswa kwe-VR njengengxenye yemikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa yinkampani kuthuthukisa ukuhlukahluka kwemikhiqizo yenkampani kanye nesipiliyoni amakhasimende anayo ngemikhiqizo yawo.
Ihhotela iMarriot lisebenzisa i-VR ukuvumela izivakashi zabo ukuzwa amagatsha abo ahlukahlukene emhlabeni wonke. Ngenkathi i-Wildlife Trust yaseNingizimu neNtshonalanga Wales ihlinzeka ukusetshenziswa kwe-VR isethi namavidiyo e-3D ukucwilisa izivakashi zabo kulwazi lokuhambela indawo yabo nokujabulela izilwane zasendle. I-VR kwezokuvakasha iveze nokuthi inenzuzo ezinkampanini ezihilelekile. Ukusebenzisana phakathi kukaThomas Cooke neSamsung Gear VR kwakune-ROI yamaphesenti angama-40 ezinyangeni ezintathu zokuqala zokuqalisa.
Izinkampani zokuthuthukisa amakhaya ezifana ne-IKEA, uJohn Lewis, kanye neLowe's Home Improvement nazo zisebenzisa i-VR. Ubuchwepheshe benza abathengi babo bakwazi ukubona ngeso lengqondo izinhlelo zabo zokufisa ukuthuthukisa ikhaya ku-3D. Lokhu akugcini ngokuqinisa umbono wabo ngamakhaya abo, kodwa futhi bayakwazi ukuthuthuka ezinhlelweni zabo futhi badlale ngokuzungeza nendawo yabo ekahle basebenzise imikhiqizo enikezwe yinkampani.
Izitolo zezitolo zakwa-TOMS ezisebenzisa i-VR zivumela abathengi ukuthi bahambe nezicathulo zabo futhi balandele ukuthi imali evela ekuthengeni kwabo iya kanjani eminikelo eMelika Ephakathi. Izinkampani zezimoto ezinjengeVolvo zinikeza abathengi bazo ithuba lokuvivinya i-drive eyodwa yamamodeli abo amasha ngohlelo lwabo lwe-VR. AbakwaMcDonald basebenzise i-Happy Meal Box yabo bayiguqula yaba yi-VR isetha i-Happy Goggles abathengi abangayisebenzisa ukudlala imidlalo futhi bazibandakanye nayo.
Izinkampani zempahla ethengiswayo, njengeGiraffe360 neMatterport, zinikezela ngokuvakasha kwempahla ebonakalayo kumakhasimende abo. Izakhiwo zezitebhisi ziphakanyiselwe phezulu ne-VR, futhi ikhuphukile i-ejenti nokubandakanyeka kwamakhasimende nentshisekelo. Amasu wokumaketha nokwakheka sekuye kwaba okuhlangenwe nakho okuthe xaxa nokwenzelwa kakhulu kwamakhasimende nabenzeli ngecebo nobuchwepheshe be-VR.
Iqiniso elandisiwe lingakusasa
Ngokwanda okuqhubekayo kokuthuthukiswa nokusetshenziswa kobuchwepheshe be-VR, kulinganiselwa ukuthi ingxenye eyodwa kwezintathu yabathengi bomhlaba wonke bazobe besebenzisa i-VR ngonyaka ka-2020. Futhi njengoba abantu abaningi sebethola futhi basebenzise ubuchwepheshe obunjalo, amabhizinisi ngokuqinisekile azolandela ngokunikeza imikhiqizo ehambelana ne-VR nezinsizakalo. Ukubopha ubuchwepheshe obunjalo ukuthi bufinyeleleke kumabhizinisi kuthuthukisa imikhiqizo, izinsizakalo, amasu wokuthengisa, kanye nokwethembeka kwamakhasimende.